May Nyane: တူနှစ်ကိုယ်
ဒီတလော.. ကျမရဲ့ စာသင်ခန်းတွေ စကားဝိုင်းတွေမှာ ၀တ္ထုရေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ လူငယ်တွေ တော်တော် တွေ့လာရပါတယ်။ သိပ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေ များပါတယ်။ အဲဒီမှာ တော်တော်များများက ၀တ္ထုဘယ်လိုရေးရမလဲ…၊ ၀တ္ထုရေးရင် သူတို့ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာရဲ့ ဟန်နဲ့ တူတူနေလို့ ခိုးချသလို ဖြစ်နေမှာစိုးတယ်.. လို့ ပြောကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျမက စု-တု-ပြုကိစ္စကို ပြောပြပါတယ်။ ကျမစိတ်ထင်တော့ လူတော်တော်များများဟာ စု-တု-ပြု အဆင့်ကို ဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့အဆင့် နဲ့ တုပဖန်တီးတဲ့အဆင့်တွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှပဲ ကိုယ်တိုင် ပြုစု ထုတ်လုပ်တဲ့ အဆင့်ကို သေချာရောက်တယ်ထင်ပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင် စာရေးသက်တော်တော်ရတဲ့အထိ၊ ကိုယ့်အတွေးထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာရဲ့ဟန် လွှမ်းမိုးတာကို ခံနေရသေးတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါ တယ်။ ကျမက စာရေးဆရာထဲမှာ (ဒေါ်)‘ကြည်အေး’ကို စွဲစွဲလန်းလန်း အကြိုက်ဆုံးပါ။ ဒါကြောင့်သူ့ဟန်နဲ့ သူ့တွေးပုံက ကျမအပေါ် အများကြီးလွှမ်းမိုးပါတယ်။ ကျမရေးခဲ့တဲ့ အထဲမှာ (ဒေါ်)ကြည်အေးရဲ့တွေးပုံမျိုး လွှမ်းမိုးတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေး တစ်ပုဒ်ကို သတိရလာလို့ ပြန်တင်ပေးချင်ပါတယ်။
(စက်တင်ဘာအရေးအခင်းကာလနောက်ပိုင်း စာရေးချင်တာတွေ ပေါ်လာပေမဲ့ မရေးနိုင်သေးသမျှ၊ ခုလို စာဟောင်းလေးတွေနဲ့ပဲ ကျေနပ်ပေးကြပါဦးနော်။)
ညနေလေးနာရီ ထိုးလုပြီဆိုလျှင် အဆောင်ရှိ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလို ရုံးစုရုံးစုဖြင့် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာရ စမြဲပင်။ တချို့က ချစ်သူ လာတွေ့မှာမို့… တချို့က ညနေခင်းမှာ ချစ်သူနှင့် ကြည်နူးသာယာဖို့… တချို့က ခြေခင်းလက်ခင်းသာချိန်မှာ သက်သက်ကို လမ်းလျှောက်ဖို့… တချို့က မုန့်စား၊ လက်ဖက်ရည်သောက် ထွက်ဖို့… အားလုံးမှာက အကြောင်းပြချက် ကိုယ်စီနှင့်ပင်။ အဲဒီအချိန်မှာ အိပ်ခန်းတွင်းအောင်းပြီး နေချင်တဲ့သူ ဆိုတာကတော့ မရှိသလောက် ရှားပါးလှပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မသစ္စ္စာက တမျိုးထူးဆန်းသော ရှားပါး မိန်းကလေး ဖြစ်လာရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
မသစ္စာတို့ အဆောင်၏ ညနေလေးနာရီသည် သိပ်အေးချမ်းသော ကြည်နူး သာယာဖွယ်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါ။ အဆောင်ရှေ့ရှိ အတော်ကျယ်ပြောသော မြက်ခင်းပြင်ကြီးကသာ စိမ်းစိုနေ၍ နေရောင်အောက်မှာ လက်လက် ပြေးကာ အေးဟန် အေးရိပ်ရှိပြီး ကောင်းကင်မှာမူ နေက ညှိုးရိပ်ပင် မသမ်းသေးဘဲ ရှိနေတတ်သည်။ သို့ပေမဲ့ အဆောင်ခြံဝင်း ဥယျာဉ်အတွင်းမှာမူ သရက်ပွင့်တို့ ထုံဝေသည့် သရက်ပင်အုပ်အုပ်ကြီး၏ အရိပ်တို့ဖြင့် အေးရိပ်ရှိပြီး အဆောင်ရှေ့လမ်းမကြီးပေါ်တွင်လည်း ပိတောက်ပင်တန်းကြောင့် အေးမြပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ပူလောင်ရိပ် မကုန်နိုင်သေးသည့် ထို လေးနာရီ ၀န်းကျင်သည် မြို့ပြထက်မှာထက်စာလျှင်တော့ မသစ္စာတို့ အဆောင်ရှိရာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်း နေရာလေးမှာတော့ အေးမြငြိမ်သက်သည်။ သာယာသည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးတော့ ထိုအချိန်သည် မသစ္စာတို့ အဆောင်သူအားလုံး ညနေခင်း ရေချိုးပြီးစ… မွှေးပျံ့ လှပ သန့်ရှင်း ကြည်စင်နေတတ်ရာ ထိုညနေခင်းက စိတ် ကြည်လင် ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ အမှန်ပဲ ဖြစ်လေသည်။
ညနေ လေးနာထိုးဖို့ ဆယ်မိနစ်လောက်အလိုတွင် မသစ္စာ၏ အခန်းဖေါ် မေစီ၏ “နှစ်ကိုယ်ကြင်တဲ့… အကိုလင်ရဲ့.. ပျိုခင်နွဲ့... မျှော်တဲ့... လေးနာရီ” ဟူသော သီချင်းညည်းသံကို ကြားရမြဲပင်၊ မသစ္စာက “မေစီကလည်းကွယ် လင်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ မဆိုပါနဲ့” ဟု တားလျှင် မေစီက ပြုံးစစဖြင့် “အိုး… တစ်နေ့ကျ ဖြစ်လာမှာပဲဟာ” ဟု ပြန်ပြောတတ်၏။ မေစီက မျက်နှာတပြည့်စာ ကြည့်မှန်ကလေးကို ကြည့်လို့ပဲ မ၀နိုင်။ ထိုအချိန်မှာတော့ မေစီက သူ့ရဲ့ ဒိုရူး(Dohru) မိတ်ကပ်ကို အသုံးမချဘဲ ရှင်မတောင်သနပ်ခါးတုံးကိုသာ နာနာသွေးကာ ခြေလက်ပါမကျန် ဖုန်နေအောင် လူးတတ်၏။ ပြီးတော့ နေ့တိုင်းလိုလိုပင် ပြုံးတုံ့တုံ့ မျက်နှာလေးဖြင့် “ကိုမောင်က ရှင်မတောင်သနပ်ခါးနံ့ရရင် အမောပြေတယ်တဲ့”ဟု ခပ်တိုးတိုးလေး ရေရွတ်ဟန်ဖြင့် ပြောတတ်သေး၏။ မေစီ အဲလိုပြောသည့်အခါတိုင်း မသစ္စာကတော့ မငြီးငွေ့ဘဲ မေစီ့မျက်နှာလေးကို အမြဲ ငေးမိရတတ်သည်။ အဲသည် အချိန်လေးမှာ မေစီ့ အပြုံးဟာ တွေ့ဖူးသမျှမှာတော့ အလှဆုံးနဲ့ အရှင်သန်ဆုံးပဲ ဟုလည်း အမြဲ တွေးမိရသည်။ ထိုအခါ… မေစီ၏ ချို့ယွင်းချက်ဟု သူမ အမြဲ ယူဆမိရသည့် ချစ်သူယောက်ျားလေးအပေါ် မျက်နှာသာပေးမှုကို မသစ္စာက အပြစ်ဟု မမြင်မိဘဲ ခွင့်လွှတ် လိုက်မိရတတ်သည်။
တကယ်တော့ မသစ္စာက ချစ်သူရည်းစားမထားဖူးသော်လည်း အချစ်ကို နားလည် ခံစားနိုင်သူ၊ အချစ်များ အပေါ် ကိုယ်ချင်းစာ နာတတ်သူပါ…။ ဒါကို ဘယ်သူသိမလဲ။ သို့ပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မသစ္စာက အချစ်ကြီး ချစ်နိုင်သူများ (သို့မဟုတ်) ချစ်ခွင့်ရကြ သူများအပေါ် မနာလို မုန်းထား ရှိနေသည်ကိုရော ဘယ်သူ သိနိုင်မလဲ။
ခက်သည်က မသစ္စာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိမြင်သောမိန်းမ ဖြစ်နေခြင်းပင်။
မသစ္စာ မှတ်ထားသလောက်တော့ အဆောင်၏ ဧည့်ချိန်တွေမှာ၊ အဆောင်ရှေ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ ထိုင်စကားပြော ကြသော စုံတွဲက ခုနစ်တွဲရှိပြီး၊ လမ်းလျှောက်လေ့ရှိသော စုံတွဲက ခြောက်တွဲ ရှိသည်။ ပြီးတော့ သူမတို့ အဆောင်မှ လှမ်းမြင်ရသည့် စားသောက်တန်း (Canteen) မှာ လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း စကားပြောသော စုံတွဲက သုံးတွဲရှိသည်။ အားလုံးပေါင်း အဆောင်မှာ ရည်းစားကို ညနေတိုင်း မျှော်စောင့်သော ကျောင်းသူ များက ၁၆ယောက်ရှိသည်။ ရည်းစားမရှိသေးသော ကျောင်းသူများကတော့ ညနေခင်း လမ်းလျှောက်ပေါ့။ ကင်တင်းထိုင်ပေါ့။ အဆောင်မှာနေကျန်သူဟူ၍ စာဂျပိုးရှစ်ယောက် နှင့် မသစ္စာသာ ရှိမြဲ ဖြစ်သည်။
မသစ္စာကတော့ ညနေခင်း လေးနာရီမှ စ၍ ရေချိုးသော ကျောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ အဲသည်အချိန် မှာဆိုလျင် စာဂျပိုးရှစ်ယောက်မှ လွဲ၍ အခြားသော ရေချိုးသူ၊ ထမင်းစားသူ မရှိတတ်ပေ။ မသစ္စာကသာ စာဂျပိုးလည်း မဟုတ်ပါဘဲနှင့် အဲသည်အချိန်မှာမှ ရေချိုးတာ။ ပြီးလျှင်တော့ ရည်းစားနှင့် သွားတွေ့မည့် မေစီထက် နည်းနည်းမှ မလျော့သော အတိုင်းအတာလောက် မွှေးပျံ့ဖုံးလွှမ်းသည့် သနပ်ခါးတို့ဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခြယ်သ၏။ ကြည့်မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်မျက်လုံးတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်စိုက်ကြည့်မိလျှင်တော့ ထိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုသန့်စင်ကို သတိရ လာမြဲ ဖြစ်သည်။
သူက မသစ္စာရဲ့ မျက်လုံးတွေအောက်မှာ ချမ်းမြေ့သတဲ့။ မသစ္စာလည်း ချမ်းမြေ့ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ချမ်းမြေ့ခဲ့တာ တစ်ခုထဲနဲ့တော့ ဘ၀မှာ (အထူးသဖြင့် ချစ်သူစုံတွဲဘ၀မှာ) မပြည့်စုံနိုင်ဘူး ထင်သည်။ (ဒါနဲ့ပဲ… ကိုသန့််စင်ကို သူမ ငြင်းခဲ့ရတာ)။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ညနေတွေမှာ… အဆောင်ကို သူလာလို့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ စကားထိုင် ပြောရသည်ကိုတော့ မသစ္စာက စိတ်ချမ်းသာရပါသည်။ ဘ၀ထဲမှာ လှောင်ပိတ် ကျဉ်းကျပ်နေရသမျှအတွက် အမောပြေစရာ လေပြေလေညှင်းကလေးကို တစ်ချက် ရှူရှိုက်လိုက်ရသလိုပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ကိုယ့်ကို ချစ်ခင် တန်ဖိုးထားပါသည်ဆိုသော လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့မှာနေရတာ အားတမျိုးရှိတာတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ဘက်မှ ရပ်တည်ပေးမည့် လူတစ်ယောက် ရှိလာတာပဲ မဟုတ်လား။
အဲသည် ကိုသန့်စင်ကြောင့်ပဲ မသစ္စာက ညနေခင်းတွေမှာ သနပ်ခါး မွှေးကြိုင်ခြယ်သလို့ အဆင်သင့် ရှိခဲ့တာ။ ကိုသန့်စင်က ညနေ ငါးနာရီလောက်မှ လာတတ်ပြီး ခြောက်နာရီထိုးတိတိလောက်မှာ ထပြန်တတ်သူမို့ မသစ္စာက ခပ်အေးအေးပဲ လေးနာရီထိုးကာမှ ရေချိုးတော့တာ… အလှပြင်တော့တာ။ တကယ်လို့ ကိုသန့်စင် ရောက်မလာတော့ကော…တဲ့။
ညနေလေးနာရီခွဲဆို အဆောင်ရဲ့ မျက်နှာစာ ဘယ်ဘက်ထောင့်စွန်းမှာရှိတဲ့ သူမ၏ အခန်းရှေ့ စင်္ကြံမှာ သူမကိုယ်တိုင် ချထားသည့် ထန်းပက်လက်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်နေပြီ။ သူတို့အဆောင်က လူသွားလမ်းနှင့် နီးပြီး အဆောင်၏ မျက်နှာစာက အုတ်ဝရံတာ မဟုတ်ဘဲ သံဇကာကွက်ဖြင့်သာ အပြည့် ကာရံထားသည်မို့ အဆောင်စင်္ကြံမှာရှိသော လူတိုင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရနိုင်သည်။ အဆောင်ပေါ်ရှိ လူကလည်း ပတ်ဝန်းကျင် မြင်ကွင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရသည်။
ညနေတွေမှာ အဆောင်ရဲ့ ဒုတိယထပ် မျက်နှာစာ စင်္ကြံပေါ်မှာ.. ထန်းပက်လက် ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်နေသော မသစ္စာကို ကြည့်ရသည်မှာ အိပ်မက်ဆန်လှသည်ဟု ကိုသန့််စင်က ပြောဖူးသည်။ မသစ္စာကတော့ သိပ်ကို သက်သောင့်သက်သာ ရှိတာပါပဲ။ ထန်းပက်လက် ကုလားထိုင်ရဲ့ ခေါင်းမှီတန်းပေါ် ခေါင်းကို ခပ်မော့မော့မှီလျက် ကြည့်လျှင်ဖြင့် အဆောင်၏ အရှေ့တောင်ဘက် မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိသည့် စားသောက်တန်းမှ လူတွေ၊ သူတွေကိုပင် မြင်ရသေးသည်။
မသစ္စာတော့ ဥယျာဉ်ထဲ ဆင်းရတာထက်၊ လမ်းလျှောက်နေရတာထက်၊ ကင်တင်း သွားထိုင်ရတာထက် ခုလို ထိုင်ကြည့်နေရတာကိုပဲ ဘယ်လို မက်မောမှန်း မသိပေ။ ကိုသန့်စင် ရောက်လာခြင်း၊ မလာခြင်းကလည်း အရေးမကြီးတော့…။
ကိုသန့်စင် ရောက်မလာသော ညနေတွေမှာတော့ သက်သောင့်သက်သာ နိုင်လှစွာသော အမူအရာဖြင့် ထန်းပက်လက် ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ရင်း ငေးသီနေသောမျက်လုံးများနှင့်၊ တခါတရံ ချိုမြိန်စွာ ပြုံးတတ်သော မျက်လုံးများဖြင့်၊ တခါတရံ ကြေမွသော မျက်လုံးများ ဖြင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိ စုံတွဲတို့ကို ငေးနေသည့် မသစ္စာကို တကယ့်ကို အိပ်မက်ဆန်စွာ တွေ့ကြရမြဲဖြစ်သည်။
ရေမိုးချိုးပြီး၊ သနပ်ခါး မွှေးထုံ လိမ်းပြီး Essence ဆပ်ပြာရည်နံ့ မွှေးထုံသည့် အ၀တ်လတ်လတ်တို့နှင့် လဲလှယ်အပြီးမှာတော့ မသစ္စာက For men ဟု သေချာ ညွှန်းဆိုထားသည့် Eternity ရေမွှေး ကို သူ၏ လည်တိုင်မှာ နှစ်နေရာလောက် ဆွတ်မြဲ ဖြစ်သည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ အဲသည် Eternity က ကိုသန့်စင်၏ ကိုယ်ပွားဟုပင် ထင်သည်။ ကိုသန့်စင်က အဲသည်ရေမွှေးကို အမြဲသုံးသူ မဟုတ်လား။ ပြီးမှ… သရက်ပွင့်နံ့တို့ သိသိသာသာ ဝေ့၀ဲပျံ့လွင့်သည့် အဲသည် နံရံကပ် ကုလားထိုင်ရှိရာမှာ လာထိုင်သည်။ ညနေ ငါးနာရီ မတိုင်မီ အထိတော့ မသစ္စာက သူ့ကို မျှော်မိသည်။ တမင် မမျှော်လိုသော်လည်း အလိုလိုပင် မျှော်မိလျက်သား ဖြစ်အောင် မျှော်ကျင့် ရနေခဲ့ပြီ။
သူ ရောက်လာလျှင်တော့ အဆောင်ရှေ့ လမ်းသွယ်လေးရဲ့ ထိပ်ဆီ သူ ရောက်လာသည်ကို လှမ်းမြင်လိုက် ကတည်းကပင် မသစ္စာက အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်၊ မှန်ရှေ့မှာ ဆံပင်ကို တစ်ချက်နှစ်ချက် သပ်ပြီး အောက်ထပ်မှ သူငယ်ချင်းတချို့လှမ်းမအော်ခင် သူ့ကို ဆီးကြို နှုတ်ဆက်ဖို့ အဆောင်ဝင်းဝကို ရောက်နှင့်အောင် သွားမြဲ ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အဆောင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိသော ပုဏ္ဏရိပ်စည်းရိုးနှင့် ကပ်လျက် ခုံတန်းမှာ ထိုင်လို့။ ကိုသန့်စင်ပြောလေ့ရှိသော စာပေရေးရာတွေ.. ဘ၀ကို တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ရတာ ထက် နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ရတာက ပိုကောင်းတယ်လို့ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ပြောပြတာတွေကို နားထောင်မည်။ တခါတခါတော့လည်း သူပြောတာတွေကို မကြားဘဲ၊ သူမတွေးချင်ရာတွေ အကြာကြီး တွေးနေမိတာတွေလည်း ရှိတတ်သည်။
တခါတခါကျတော့ ကိုသန့်စင်က ခေါင်းကို ညင်ညင်သာသာ ခါယမ်းကာ “ကျနော်သိတယ်.. မသစ္စာ ကျနော့်ကို မချစ်ဘူးဆိုတာ။ ကျနော်က တကယ်တော့ ရူးနေတာပဲ…၊ ကျနော်ဟာ ကိုယ့်အနာဂတ်ကိုလည်း မသိတဲ့ ကောင်ပါ” ဟု ပြောပြန်သည်။ ပြီးတော့လည်း “တနေ့နေ့ကိုတော့ ကျနော် မျှော်နေပါရစေနော် မသစ္စာ” လို့လည်း မပြီးဆုံးနိုင်သော ဇာတ်ကို ဆက်ချင်ပြန်သည်။ သည်နေရာမှာ အတ္တကြီးသော မသစ္စာကတော့ ဇာတ်မျောထဲမှာ အသာစီးနေရာမှ နေနေရခြင်းအတွက် ပျော်စရာ ကောင်းသည် ဟု ခံစားရသည်။
ကိုသန့်စင် မလာသောနေ့တွေမှာတော့ မသစ္စာက ကိုယ့်စိတ်ကို ပုံသွင်းထိန်းချုပ်မှု မလုပ်တော့ဘဲ လွင့်ချင် သလောက် လွင့်ဖို့သာ လွှတ်ထားလိုက်တော့သည်။ အဲသည် အခါမှာတော့ မသစ္စာ၏ ဟန်ဆောင် ဖုံးထားသော ပင်ကိုစိတ်တို့က တကယ်ပဲ ရွက်လွှင့်တော့သည်။ ရွက်လွှင့်သော စိတ်တို့၏ ဦးတည်ရာကား ချစ်သူစုံတွဲ များသာဖြစ်သည်။
အဆောင်ပေါ်မှစီးကြည့်လျှင် မြက်ခင်းပြင်ကျယ်တပြောကြီး။ ပြီးတော့ အဲဒီမြက်ခင်းရဲ့ အစပ် အနားသတ်မှာ တော့ စာသင်ဆောင်တချို့။ စာသင်ဆောင်တွေရဲ့ဘေး လမ်းသွယ်က မြက်ခင်းပြင်ကျယ်ထဲကို ဖဲ့ဝင်ကာ သူမတို့ အဆောင်ထံ ရောက်လာသည်ကို မြင်နိုင်သည်။ သည်တော့ အဆောင်ပေါ်မှ ကြည့်ရင်းဖြင့် အဆောင် ညနေခင်း ဧည့်ချိန်တွေမှာ အလျှိုလျှို ထွက်သွားကြသည့် ချစ်သူစုံတွဲ အားလုံးလိုလိုကို မြင်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့်လည်း ထိုစုံတွဲတို့က ထိုမျှသော နယ်နိမိတ်၊ ဧရိယာကို ကျော်မသွားကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။
မသစ္စာ၏ စိတ်တို့က မြင်ကွင်းတလျှောက် လိုက်ပါသည့်အခါ… မကြာခဏ စိတ်ကောက်နေလေ့ရှိတတ်သော နီထွေးနှင့် ကျော်ကျော်သက်တို့ စုံတွဲ၊ အမြဲချစ်ခင်ယုယစွာ အချိန်ပေါင်းများစွာကို တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ကာ သုံးပစ်လေ့ရှိသော ထားထား နှင့် နေလင်းတို့ စုံတွဲ၊ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေလို နင်၊ ငါ ရိုက်ကာပြောသော်လည်း တခါမှ ရန်ဖြစ် စိတ်ကောက်တာ မတွေ့ဖူးသည့် ချော နှင့် သီဟတို့ စုံတွဲ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အားပေးကာ အခုလို ရည်းစားဘ၀ကတည်း က ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ရုန်းကန်နေကြရသော မာလာ နှင့် ဖေလတ်တို့ စုံတွဲ၊ အနောက်တိုင်းဆန်ကာ ပွင့်လင်းလွတ်လပ် သလောက် ရည်းစားလည်းများသည့် မေစီက သူနှင့်ကျမှ အချစ်စစ်ကို တွေ့ပါသည်ဟု ကြွေးကြော်ရပါသည့် ဉာဏ်ဦး နှင့် မေစီတို့စုံတွဲ တို့ကို အထူးသဖြင့် မြင်နိုင်သည်။ ထိုစုံတွဲတို့က အလွန်ဆုံး ကျောင်း စာသင်ဆောင် လှေခါးထစ်တွေမှာ ထိုင်ရုံထက်ပို၍ ဝေးဝေး သွားလေ့မရှိရာ… မသစ္စာ၏ မျက်လုံးရှေ့သို့ အလိုအလျောက် ရောက်လာတော့သည်။
အဲသည် စုံတွဲတို့ကို မျှော်ငေးရင်း မသစ္စာက နီထွေး စိတ်ကောက်သည်ကို မျက်ရည်တလည်လည်ဖြင့် ချော့ရင်း ပြေလည်သွားတော့ ပျော်မဆုံးဟန် မခွဲနိုင်မခွာဟန် အပြည့် ရှိသည့် ကျော်ကျော်သက်ကိုကြည့်ကာ ရင်ခုန်သည်။ ထားထား နှင့် နေလင်းတို့၏ သာယာ ကြည်နူးဖွယ် အချစ်၌ မွေ့လျော်သည်။ ချော နှင့် သီဟ လို အရာရာတိုင်ပင်လို့ရသော သူငယ်ချင်းဆန်သည့် အချစ်ကို သဘောကျသည်။ မာလာနှင့် ဖေလတ်လိုလည်း ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ရဲချင်သည်။ ပြီးတော့ မေစီ နှင့် ဉာဏ်ဦး လို အရာရာကို ပြီးမြောက် ကျော်ဖြတ် ပစ်လိုက် နိုင်သည့် အရူးအမူး အချစ်မျိုးကိုလည်း ကြုံတွေ့ဖူးလိုသည်။ တကယ်တော့ ထိုစုံတွဲတို့က မသစ္စာ၏ အိပ်မက်များသာ ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့မှာလည်း မသစ္စာက အိပ်ရာမှ နိုးထသည့်အခါ အိပ်မက်တို့ကို ပြီးဆုံး ဖြေဖျောက်ပစ်လိုက်ရသူပဲ မဟုတ်လားလေ…..။
မသစ္စာက ဘ၀ကို ကြောက်ရွံ့သူဖြစ်သည်။ သို့ပေမဲ့ ယင်းကို ကိုသန့်စင်ကတော့ မသိပေ။ ကိုသန့်စင်သည် သူ့ကို မသစ္စာ ဘာကြောင့် ငြင်းဆန်နေသလဲ၊ ဘာကြောင့် ခေါင်းမညှိတ်သလဲ ဆိုတာကို အဖြေရှာမရပေ။ စဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုသန့်စင် နှင့် မသစ္စာက မတူမတန်စရာæ မလိုက်ဖက်စရာလည်း မရှိပြန်။ ကိုသန့်စင်နှင့် မသစ္စာက လိုက်ဖက်၍ပင် နေပေသေးသည်။ ကိုသန့်စင်သည်လည်း မသစ္စာလိုပင် နယ်ကျောင်းသား။ လူလတ် တန်းစား၊ ၀န်ထမ်းသားသမီး။ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး နေရသူများ။ တနည်းအားဖြင့် စိတ်ချလက်ချ လက်တွဲ နိုင်သည့် အရည်အသွေးလည်း ပြည့်သူချင်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ မသစ္စာ တွေးသလို ဆိုရင်တော့ ကိုသန့်စင်က မသစ္စာကို နားမလည်နိုင်သေးသူ။ အကဲမခတ်တတ်သေးသူ။ အထူးသဖြင့်တော့ ကိုသန့်စင်က လောကထဲမှာ ရိုးလွန်းသူ ဖြစ်နေခြင်းပင်။ မသစ္စာအမြင်အရတော့ ဒီလောကကြီးက ရိုးသားနေဖို့ မကောင်းသောကြောင့် ရိုးသားနေလို့ မဖြစ်။ ထိုအခါ ဒီလောကထဲ တသက်လုံး နေထိုင်သွားဖို့ရာမှာ သူမကို ဦးဆောင်နိုင်သည့် ထက်မြက်ပါးနပ် သော ယောက်ျားသာ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလေသည်။
ပြီးတော့ မသစ္စာက ဘ၀ထဲမှာ တစ်သက်လုံး ရုန်းကန်ပင်ပန်းခဲ့ရခြင်းတို့ဖြင့် နှစ်ဆယ့်နှစ်နှစ် လုံးလုံး နေခဲ့ရသူမို့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရမည့် နောက်ပိုင်း သက်တမ်းများကိုတော့ အေးအေးသက်သာဖြင့်သာ ဖြတ်သန်း လိုတော့သည်။ ထိုအခါ မသစ္စာက ဘ၀ထဲမှ ထွက်မသွားနိုင်သေးခင် အချိန်ကလေးအတွင်းမှာတော့ ဒုက္ခကို ကြောက်သူသာ ဖြစ်တော့သည်။
အခန်းဖေါ်မေစီကတော့ မသစ္စာဟာ ခုလောက် ခေါင်းအေးအေး အမြင်ရှင်းရှင်း ထားတတ်သူဖြစ်လျက်… အသည်းနှလုံးထက် ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးနိုင်သူလည်း ဖြစ်လျက်… ဘ၀ကို လောကဓံဆိုတာကို ထိုမျှ ကြောက်ရွှံ့နေခြင်းမှာ အပြစ်ဟု ဆိုသည်။ မသစ္စာကတော့ မေစီ့ကို ခပ်ပြုံးပြုံးဖြင့်ပင်… “အင်းပေါ့လေ… မေစီက တော့ ပြောမှာပေါ့ တခါမှ မဆင်းရဲဖူးခဲ့ပဲကိုး” ဟု မှတ်ချက်ချသလို ပြောတတ်သည်။ “အဲလို ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးလို့လည်း ကျိန်းသေ ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်လို့ သိတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေကို ရှောင်နိုင်တာပေါ့” ဟု ဆက်ပြော ပြန်လျှင်လည်း မေစီက ခေါင်းတညိတ်ညိတ်ဖြင့် ထောက်ခံရပြန်သည်။
တကယ်လည်း မသစ္စာက ခုထိတိုင် အသည်းနှလုံးကို ဖုံးကွယ် လိမ်ညာထားနိုင်ဆဲ။ လိုသလို အသုံးချ၍ ရနေဆဲပဲ ဖြစ်သည်။ မသစ္စာက ချစ်သူစုံတွဲများကို ပြုံးယောင်ပြုံးတုံ့ ငေးနေဆဲမှာပင် အကွာအဝေးပေါင်း များစွာကို ကျော်ဖြတ်ကာ အများကြီး တွေးမြင် ပစ်လိုက်သူပေပဲ။ ကြည်နူးရွှင်ပြနေသော ချစ်သူတစ်စုံကို ကြည့်ရင်းမှပင် အဲဒီ စုံတွဲနေရာမှာ သူမနှင့်အတူ ကိုသန့်စင်ကိုပါ အစားထိုး ကြည့်တာ။ အဲဒီအခါ… အိမ်ထောင်ရေး နယ်ပယ်တွင်းရှိ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကို မြင်တော့တာ။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀မှာ သူမ နှင့် ကိုသန့်စင်က ဘွဲ့ရပညာတတ်ဆိုတော့လည်း ပညာတတ်မာန်က ကြီးမည်။ သူများကို အောက်ကျ မခံ။ သူများ အောက်ကျို့ရမည့် အလုပ်မျိုး မလုပ်နိုင်။ ကိုသန့်စင်က ပိုဆိုးလိမ့်မည်။ သူက သူ့ပညာမှာ တော်သည့်လူ ဖြစ်သည့်အပြင်၊ မာနကလည်း ကြီးပေ့ ဆိုသည့် အစားထဲက။ “ကိုယ့်ပညာကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ စော်ကားလို့ကတော့ ငုံ့ခံနေစရာ အကြောင်းမရှိဘူး”ဟူသော စကားမျိုးကို သူ့ထံမှ မကြာခဏ ကြားခဲ့ရဖူးသည်။ သည်တော့ ကိုသန့်စင် နှင့် သူမတို့သည် သူမတို့၏ မိဘများလိုပဲ ရိုးကုပ်စွာ ဆင်းရဲသော ၀န်ထမ်း မိသားစုမျိုးသာ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ ကိုသန့်စင်က မောင်နှမငါးယောက်ထဲမှာ သားအကြီးဆုံး လည်း ဖြစ်ပြန်သည်။ ခက်သည်က မသစ္စာကိုယ်တိုင် မောင်နှမငါးယောက်ထဲမှာ သမီးဦး ဖြစ်နေသည့်အတွက် သားဦး သမီးဦးတို့၏ ငဲ့ညှာရမှု၊ ထောက်ပံ့ရမှုတို့ကို သဘောပေါက်သည်။
ထိုအတွေးတို့ကို တွေးမိတိုင်းပင် မသစ္စာက သက်ပြင်းမှုတ်ကာ မျက်စေ့စုံမှိတ်လျက် ခေါင်းခါ ပစ်လိုက်ရမြဲ ဖြစ်သည်။ အတွေး၌ပင် ထိုဘ၀ကို ထိတ်လန့်၏။ ကိုသန့်စင်တို့ ယောက်ျားတွေကတော့ မိန်းမတွေ ဂုဏ်မက်သည်ဟုသာ စွပ်စွဲမှာပေါ့။ သို့ပေမဲ့ အောင်မြင်သော အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုအတွက် ငွေကြေးဆိုတာ အခြေခံလိုအပ်ချက်ပဲ မဟုတ်လား။ ချစ်သူတွေ အိမ်ထောင်ဖက်တွေ ဖြစ်ကြပြီးမှတော့ ငွေကြေးအတွက် ရန်ဖြစ်ကြရတာ ရှက်စရာကောင်းသည်မို့ ဒါကို မသစ္စာက ရှောင်ရှားလိုသည်။ ဒါပေမဲ့ ရှောင်ရှားဖို့လည်း ခက်မှာ သေချာသည်။ ထိုအခါ… မသစ္စာက ထိုသို့ ပြဿနာရှိနိုင်သည့်သူကို ချစ်သူအဖြစ်ပင် မပတ်သက် လိုတော့ပေ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်ဟုလည်း ထင်သည်။ မလိုအပ်ပါဘဲ ရန်သူလည်း မဖြစ်လိုတော့ပေ။ ကိုသန့်စင်ကို ငြင်းဖြစ်သည့် အဓိကအကြောင်းက ဒါပဲဖြစ်သည်ကို မသစ္စာကတော့ ၀န်ခံရဲပါသည်။
မေစီတို့ကတော့ “မသစ္စာက အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားဘူး”ဟု ဆိုသည်။ စင်စစ်တော့ မသစ္စာကမှ အချစ်ကို တကယ် တန်ဖိုးထားသည်ဟု ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်သည်။ ကြည့်လေ… အချစ်ကို တန်ဖိုးထားလို့ပဲ၊ အချစ်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်လေး ပျောက်ပျက် မသွားအောင်လို့ပဲ အဲဒီ အချစ် ဆိုတာကို အင်မတန် လှည့်ဖျားတတ်သော၊ ပူလောင်ပြင်းပြခြင်းတို့ များပြားသော အိမ်ထောင်ဘ၀ဆိုတဲ့ နွံထဲ ဆွဲခေါ် မထည့်လိုတာပေါ့။
အချစ်… ဆိုတာကို သီးသီးသန့်သန့်လေး… ပြီးတော့၊ ဟိုး ခပ်မြင်မြင့်မှာသာ ကိုးကိုး ကွယ်ကွယ် ထားချင်သည်။
အိမ်ထောင်ရေးဘ၀ဆိုတာထဲမှာတော့ စဉ်းစားချင့်ချိန်ခြင်းတွေ၊ တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်မှုတွေနှင့်သာ တည်ဆောက်လို သည်။
မသစ္စာကတော့ ရင့်မာသည်ဟုပင် ဆိုဆို…။ မိန်းမတစ်ယောက်ဘ၀မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို လက်ထပ် ယူလိုက်ရတာဟာ ကိုယ့်ဘ၀ကို အကုန် ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်မို့ ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ပိုင်ကျွန်ပဲ ဖြစ်သွားသည်ဟု ထင်သည်။ သို့ဆိုလျှင် အဲသလောက် ပေးဆပ်နိုင်ဖို့ တန်ရာတန်ဖိုးတော့ လိုချင်သည်။ ထိုနေရာမှာ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပုံခြင်းကတော့ မ်ိန်းမတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ကွဲပြားနိုင်သည်ပေါ့။ မသစ္စာအတွက်ကတော့ အဲဒီ ခင်ပွန်းလောင်း၏ ကိုယ့်အပေါ် အချစ်သစ္စာရှိမှုနှင့် ငွေကြေးက တန်းတူကျစွာ တန်ရာတန်ဖိုး ဖြစ်နေသည်။ ယင်းအတွက် “ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငွေကြေးနှင့် လဲလှယ်သူ” သို့မဟုတ် အရိုင်းဆုံး… ကြေးစားနှင့်ပင် နှိုင်းနှိုင်း၊ မသစ္စာက သူမ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မှန်သည်ဟုသာ ယုံကြည်သည်။
ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ ရုန်းကန် ပင်ပန်းခဲ့ရသမျှ ကိုယ့်သားသမီးတွေကိုတော့ ပြည့်စုံစေချင်သည်။ တူနှစ်ကိုယ်… တဲအိုပျက်မှာ နေရနေရ အရေးမကြီးသော်လည်း တူနှစ်ကိုယ်မက၊ သားသမီးတွေ ရှိလာလျှင်တော့ ထိုသားသမီးတို့အတွက်… ဆိုတာကို ငဲ့သင့်ပြီ မဟုတ်လား။ မသစ္စာက အဲသည်အထိ တွေးသည်။ ဘာလို့ဆို ကိုယ်တိုင် မပြည့်မစုံဖြင့် ကြီးပြင်းခဲ့ခြင်း ဒဏ်ရာ ရထားသူ မဟုတ်လား။
သည်တော့ မေစီက ပြောသည်။ “အဲလိုတွေးတာ မင်း ကိုသန့်စင်ကို တကယ် မချစ်သေးလို့ပါ။ တကယ် ချစ်ရင်တော့ အဲဒီ အယူအဆအားလုံးဟာ ပြောင်းပြန်တွေ ဖြစ်သွားမှာပဲ” တဲ့။ မသစ္စာကတော့ ငြင်းလည်း မငြင်း၊ ၀န်လည်း မခံဖြစ်ပါ။ ဒါဟာ သိပ် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စလည်း မဟုတ်ဘဲ။
“အိမ်ထောင်ရေးဘ၀ရဲ့ အဓိကရန်သူဟာ ဖေါက်ပြန်မှုပဲလို့ ကျမထင်တယ်…။ ပြီးတော့ ငွေကြေး ချမ်းသာလွန်းတာရယ်.. ငွေကြေး ချို့တဲ့လွန်းတာရယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်မှုဆိုတာမှာ ငွေကြေးချမ်းသာမှ-မှ မဟုတ်ဘဲ။ ဒီတော့ အခြေအနေတိုင်းမှာ လင်သားရဲ့ ဖေါက်ပြန်ခြင်းကို ခံရနိုင်တဲ့ မိန်းမဘ၀မှာ ငွေကြေးပြည့်စုံနေတာကမှ ခံသာဦးမယ် ထင်တာပဲ။ အနည်းဆုံးတော့.. ဖဲလေး ရိုက်လိုက်၊ ဗွီဒီယိုကြည့်လိုက်၊ တီဗွီဂိမ်းဆော့လိုက်၊ ပစ်ကနစ်(Picnic) ထွက်လိုက်နဲ့ နေနိုင် တာပေါ့။ ဆင်းများ ဆင်းရဲရင်တော့ တော်တော် ချောင်ပိတ်ခံရတာမျိုး ဖြစ်မှာ။ ထမင်းငတ်တာ ပူရ… လင်ဖေါက်ပြန်တာအတွက် စိတ်ဆင်းရဲရ… သားသမီးတွေ မပြည့်မစုံနေရလို့ စိတ်ပူလောင်ရ နဲ့ လေ… ”
ဟုပြောတော့ ကိုသန့်စင်က သူမ ကျေနပ်လက်ခံနိုင်လောက်သော နှစ်သိမ့်စကားမျိုး ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့။ ခပ်ငူငူငိုင်ငိုင်ပဲ နေနေခဲ့သည်။ နောက် အတော်ကြီးကြာမှ လေသံ တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြင့် “မဖေါက်ပြန်တဲ့ ယောက်ျားလည်း ရှိပါတယ်”ဟု ဆို၏။ “ကျမက အဆိုးဆုံးကို တွေးထားရတာပေါ့” ဟု သူမက ပြန်ဖြေတော့ လည်း“ဆင်းရဲတာကို ချစ်သူနဲ့ လက်တွဲရင်ဆိုင်ရင်ကော” ဟု မေးပြော ပြောသည်။ “ဘ၀ကို ကျမ ကံမစမ်းရဲ တော့ဘူး ကိုသန့်စင်”ဟု ပြောလျှင်လည်း သူက မျက်နှာတစ်ချက်ပျက်ကာ သူမကို မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘဲနှင့် “တကယ်တော့ မသစ္စာကို ကျနော်က တခြားသာမန် မိန်းမ တွေလို ထင်မထားခဲ့ဘူး” ဟု ခပ်မာမာ လေသံ တမျိုးဖြင့် ပြောလေသည်။
“ကျမကို ငွေမက်တယ်လို့ ပြောချင်တာမဟုတ်လား ကိုသန့်စင်။ ဟုတ်ပါတယ်…ကျမ ငွေမက်တာ ပါပဲ။ ဘာလို့ဆို ကျမတို့ မိန်းမတွေအတွက်က ဘ၀မှာ အဆင်မပြေစရာဖြစ်လာရင်… ရှင်တို့လို အရက်သောက်.. ဘောလုံးပွဲသွား.. ကြေးစားမိန်းမဆီသွား.. အဲလိုထွက်ပေါက်မျိုးတွေ ဘာ တစ်ခု မှ မရှိဘူးလေ။ ကျမ ပြောခဲ့ပြီးပါပကော”
သည်အခါမှာတော့ သူက သက်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ကာ ခေါင်းကို လေးလေး ခါယမ်း၏။ မသစ္စာကတော့ ထူးပြီး မခံစားချင်တော့ပါ။ ခံစားခဲ့ရတာ များပြီ မဟုတ်လား။
တကယ်ဆိုတော့ မသစ္စာတို့ဘ၀က လင်သားတစ်ဦး မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့်ဘ၀တော့ မဟုတ်ပေ။ တစ်ခု တော့ ရှိမည်။ အိမ်ထောင်ပြုမှ ကိုယ့်အခြေအနေ တိုးတက်မည် ဆိုလျှင်တော့ လင်သားတစ်ဦး လိုအပ် သည်ပေါ့။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ ဆုတ်ယုတ်နေဆဲဆိုလျှင်တော့ မသစ္စာက မိသားစုထဲမှာပဲ တစ်ယောက်တည်း နေသွားတာ ကောင်းသည်ဟု ရွေးချယ်လိုပါသည်။
စင်စစ်တော့ မသစ္စာက ကိုယ့်အပေါ် စွဲလန်းချစ်မက်သည့်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာလည်း ပြည့်စုံသည့် ယောက်ျား တစ်ယောက် ရဖို့ မျှော်လင့်ခြင်းက နည်းနည်းတော့ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်ပါသည်။ မသစ္စာက မိန်းမလှမှ မဟုတ် ဘဲ။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ လှရင်လှ၊ မလှရင်တော်မှဆိုလျှင်တော့ မသစ္စာက အနည်းငယ် ထူးချွန်သည်ဟု ဆိုနိုင်သော ဂုဏ်ဒြပ်မျှနှင့်သာ ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။
ဒါတွေကို မသစ္စာက အတွင်းကျကျ နားလည်ထားပါ၏။ ထိုအခါ… မသစ္စာက အချစ်ဆိုတာကို အိပ်မက်လိုပဲ စိတ်ကူးယဉ် မက်ကာ လက်တွေ့ဘ၀ကို မေ့လျက်… နေ့ရက်တွေမှာ နေပျော်ရတော့သည်။ ချစ်သူစုံတွဲများစွာ ကို အားကျ၊ မနာလို၊ နှစ်လို၊ ၀န်တိုခြင်းများစွာတို့ လွန်ဆွဲသော်လည်း၊ အတက်အကျတို့ဖြင့် အသက်ဝင်သော ထိုရက်များထဲမှာ မသစ္စာ ပျော်နေတတ်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သို့နှင့်ပင်… နေ့စဉ် ညနေတွေမှာ မက်နေကျ အိပ်မက်ကို မက်ယူဖို့ ကိုသန့်စင်ကို မျှော်စောင့်၊ ချစ်သူစုံတွဲများ ကို ကြည့်ငေး၊ အတွေးများနှင့် အနာဂတ်ခရီးကို ဆီးကြိုသွား၊ ပြီးတော့၊ ပျော်လိုက်.. ငိုလိုက်… နာကျင်လိုက်… ကြေကွဲလိုက်… ရန်စောင်လိုက်… မာန်တက်လိုက်ဖြင့် မသစ္စာကတော့ စိတ်ကူးယဉ်တွေကို ပျိုးမြဲ ပျိုးနေ မိတော့သည်။
(ရှေ့ပြေးမဂ္ဂဇင်း၊ ၉၄၊အောက်တိုဘာလ၊ တွဲ ၃-အမှတ်၁)
Hi Saya Ma,
I love "Kyi Aye" also. I alo love your stories and please post more :) .I also love Kyi Aye poems expecially "Myit Lae Hmar Chit Lae Kya Tone Ka" (Sharing Love on the River" , U know?
သိတယ်..အောင်ဖြိုးရေ.. အလွတ်တော့ မရဘူး။ 'မြစ်လှယ်မှာ အချစ်လှယ်ကြတုန်းက'ရော.. 'စောင့်ခေါ်ပါမောင်'ရော.. 'အနုပညာကျွန်း'ရော...
အများကြီးပါ..။ ကျမက အကုန်ကြိုက်တာ။
ဆောရီး. မြစ်လှယ်မဟုတ်။ မြစ်လယ်။
နောက် သစ္စာသစ်.. တစ္ဆေ ..။ နာမည်ကြီး ကဗျာတွေပေါ့။
Thanks again for this novels and waiting for more please Saya Ma. Definite this one is Kyi Aye's style. Psychological conflicts ofagirl. Sayama Kyi Aye such style are clearly visible in all her poems and novels. My favourite is "Kya Ma Pin Nyar Tae", Thanks and post more short stories. I am waiting.
ကိုသန့်စင်ရဲ့ နေရာကနေ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်…
ဆရာမရေ… စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ မသစ္စာ နောက်ဆုံးတော့ လက်တွေ့ဘ၀ကို သတိရသွားလား ဆိုတာ သိချင်တယ်